Markay Musiibo dhacdo! | Martech Zone
48-dii saac ee la soo dhaafay madadaalo ma lahayn. Teknoolojiyaddu waa wax cajiib ah, laakiin weligeed ma fiicna. Goorma hadday guul darreysato, ma hubo inay dhab ahaan jiraan intaas oo diyaargarow ah oo aad yeelan karto… laakiin waa inaad jawaab ka bixisaa.
Waxaa laga yaabaa inaad ogaatay in boggeena uu si xarago leh u gaabinayo labadii usbuuc ee la soo dhaafay. Waxay ahayd wax la yaab leh marka la eego xaqiiqda ah inaan ku leenahay a xirmo martigelin weyn oo lagu daray keydka macluumaadka iyo shabakada bixinta nuxurka. Maaddaama aan boos badan haysannay, waxaan ku martigelinnay bogag kale halkaas, sidoo kale… taasina waa qaladkeenna!
Mid ka mid ah mashaariicdeena waa a qalabka la socodka warbaahinta bulshada kaas oo ku xiraya Twitter iyo Facebook, aruurinta xogta kumanaan koox oo ka tirsan suuqa ciyaaraha. Hal mar maalintii waxay uruurisaa macluumaadka taageereyaasha iyo kuwa raacsan, iyagoo ku uruurinaya keydka macluumaadka. Waxaan ku samaynay horumar badan mashruucan dhawaana waxaan ogaanay in tirooyinka qaar khaldameen. Macaamiilkeena, Pat Coyle, wuu noo samray sidaan dhib ugulaheynay arinta.
Kadib dhammaan h ** l way kala jabeen! Waxay umuuqataa nidaamka aruurinta macluumaadka inuu biloowdo daqiiqado gudahood halkii maalintii halmar. Macluumaadkayagu wuxuu ku kordhay 1G maalmo gudahood, hoos u dhigista adeegeena iyo qaadashada tanno boos ah. Habeenkii kale waxaan si dhab ah u daawanayay maaddaama goob kasta oo aan ku lahayn koontada ay bilaabeen inay hoos u sii socdaan mid mid. Ugh.
Waxaan horeyba u wadnay qorsheyaal aan ugu wareejineyno Martech WPEngine si loogu dhejiyo jawi heegan ah oo leh keyd, keydinta nuxurka isku dhafan, iyo dardar badan oo server ah. Waxaan ku leenahay lamaanayaal kale oo aan ku faraxsanahay adeegga iyo taageeradooda cajiibka ah labadaba. Ma ahan in Mediatemple uu xumaa, ee waa wax fudud in jawigan loo dhisay daabacaadda baloogyada sida kuwayada oo kale oo hela tiro gawaari ah. Saqbadhkii habeenka, waxaan ku qoray wiilasha WPEngine wayna i kaceen ilaa subaxdii! Mahadsanidiin!
Marka xigta, waxaan bilownay inaan eegno sida loo hagaajiyo keydka macluumaadka. Xaqiiqdii waxay joojisay server-kii kaydka xogta waxayna kharribtay miiskii ugu weynaa (midka leh DHAMMAAN xogta dhexe!). Maadaama adeegu buuxsamay, dayactir kuma sameyn karno… ma awoodno inaan galno feylasha, ma celin karno… waan ku xannibnay. Dadweynihii joogay MediaTemple ayaa soo booday oo miiska hagaajiyay. Waxaan markaa awoodnay inaan sameyno gurmad buuxa oo aan bilowno inaan dib u soo celino bogagga kale.
U guurista WPEngine ma ahayn xanuun la'aan. Maaddaama aynaan awoodin inaan marinno xog-ururinteena, waxaan ku qasbanaannay inaan qaadno shaashaddii ugu dambeysay ee xogta database taas oo sababo jira awgood lumiyay dhammaan isku-xirnaanteenna nidaamka. Waxaan leenahay ka-soo-celinta WordPress-ka ah, sidoo kale, laakiin kaydkeennu waa mid aad u ballaadhan oo in la isu keeno dhammaan qaybaha keydku ay qaadan doonaan waqti aad u dheer.
Marka, waxaan dib u soo celinay xogta oo aan ku xididaynay 2,500 + qoraal oo aan si taxaddar leh dib ugula soocnay. Waan hubaa inaan xoogaa ku garaaci doonno SEO-ga maxaa yeelay taasi waxay beddeshay dariiqyada URL… markaa waxaan qaadannay wax ka sii ballaadhan oo waxaan beddelnay qaabdhismeedkeenna permalink (qeybta la'aan). Waa wax aan u baahday inaan sameeyo in muddo ah, markaa hadda waxay ahayd waqti ka wanaagsan sidii hore.
Waan iska tirnay mawduucii hore. Waxay ahayd sawirro muuqaal ah oo culus (oo aan lahayn CSS sprites) mana ahayn mid saaxiibtinimo leh in la qiyaaso. Waxaan go'aansanay kaliya inaan si aad ah wax uga bedelno kan Labaatan kow iyo toban mawduuc taasi waa heerka WordPress hadda. Waa HTML5 oo diyaar ah waxayna leedahay tan astaamo naqshad leh oo ku habboon in laga faa'iideysto.
Dhanka kale, Jenn ayaa hoos u dhigay qalcadda at DK New Media - ku mashquulida mashaariic yar oo aan ku tuuro waqti weyn. Istefanos wuxuu soo jiiday gebi ahaanba (wuxuu horey u shaqeeyaa habeeno!), Saaxiib wanaagsan Adam Yar laadiyay oo caawiyay, MediaTemple ayaa ka saartay beerta, WPEngine ayaa caawisay, sidoo kale. Waad ku mahadsan tahay qof walba… waxaan mar kale ku soo laabannay bar-qorista internetka!
Hadda waa waqtigii aan hurdo heli lahaa :). Kadib waxaan hagaajin doonnaa iPad-ka iyo mawduucyada moobiilka!
Tags: plugin plugincdndhexdhexaadpluginsheygakeydka wordpresswordpress soo celiwpengine
Tilmaam: Suuqgeynta emaylka ee Delivra
Oktoobar 27, 2011 at 9:43 PM
Aad baan uga xumahay inaan maqlo inaad dhibaatooyinkan soo martay. Tani waa halka xirfadlaha IT-ga, sida nafteyda, uu lahaan lahaa oo WAA inuu ilaaliyo nidaamyadaada si looga hortago xaaladdan oo kale. Waan hubaa inaad heleyso faallooyin badan iyo qoraallo noocan oo kale ah, laakiin xaaladdu way fududahay. Dayactirka saxda ah, qorshaynta koritaanka iyo saadaalinta ayaa ahayd inay u diyaariyeen boggagaaga iyo keydka macluumaadkaaga heerkan taraafikada. Waxaan jeclaan lahaa inaan kula hadlo, xaaladaan ku saabsan, iyo talaabooyinka la qaadi karo si looga hortago mustaqbalka. Waxaan horay uhadalnay, waad igu ogtahay bartaada twitter-ka sida @indyscompugeek.
Daniel, HeadGeek oo ka tirsan Indy's Computer Geek
Oktoobar 27, 2011 at 9:47 PM
Shaki kuma jiro, Daanyeel! Xaaladdan oo kale, waxaan si sax ah u helnay wixii aan ku bixinnay… waana nala bixiyay. Waxaan ku jirnaa miisaaniyad kabo ah midkan.
Oktoobar 30, 2011 at 1:27 AM
Doug - UGH! waa sax. Waxaan ku jiray degelkan qiyaastii hal usbuuc ama wax ka hor aqrinta baloog waxaanan ogaaday sida ay gaabiska u ahayd. Waxaan si dhab ah uga fikiray inaan email kuu soo diro oo sidan ku idhaahdo, laakiin waxaan u maleeyay kumaan ahay inaan u sheego 'Ninka' in degelkiisu yahay "caajis." Hadda waan ogahay sababta! Marka, waan ku faraxsanahay adiga (iyo kanaga) inaad awood u yeelatay inaad dib u soo celiso oo aad shaqeyso. Weligaa ma tixgelisay isku-darka StudioPress Genesis Framework - http://www.studiopress.com - Waxaan u isticmaalaa haddii loogu talagalay boggeyga iyo dhammaan boggaga macmiilkayga. Qalab aad u adag oo software ah - Jeclow!
Oktoobar 30, 2011 at 11:06 AM
Salaan Greg! Waxaan maqlay waxyaabo aad u wanaagsan oo ku saabsan qaabka Genesis. Weli ma aanan isticmaalin laakiin waxaan u maleynayaa inaan ka soo bixi karo WordPress guru, Stephen, si aan u dhiso mawduuc. Mawduucani wuxuu ku bilaabmay labaatan iyo kow laakiin waa la gebi ahaanba la habeeyay oo la hagaajiyay. Illaa iyo hadda, waxay umuuqataa inay sifiican kor ugu sii socoto!